केटाले लुकाएर हिड्ने तर केटीले देखाएर हिड्ने के हो.? हाँसेरै बेहोस, यति रमाइलो छिटो हेर्नुहोला... -
केटाले लुकाएर हिड्ने तर केटीले देखाएर हिड्ने के हो.? हाँसेरै बेहोस, यति रमाइलो छिटो हेर्नुहोला…
भाडामा बस्ने युवतीका कोठामा घरबेटीले गोप्य क्यामेरा फिट गरेपछि…
प्रहरीले भनेको छ, ‘यो क्यामेरा पछिल्लो १५ दिनदेखि प्रयोग भइरहेको थियो । घरवालाले धेरैतले घरको एक तला भाडामा लगाएका थिए ।’
प्रहरीले सो घरबाट ६ वटा यस्ता क्यामेरा बरामद गरेको जानकारी दिएको छ । प्रहरीले भनेको छ, ‘यो क्यामेरा पछिल्लो १५ दिनदेखि प्रयोग भइरहेको थियो । घरवालाले धेरैतले घरको एक तला भाडामा लगाएका थिए ।’ उनीमाथि आईटीएक्ट तथा महिला हिं’सा रोक्नका लागि बनेको अधिनियमअनुसार मु’द्दा दर्ता गरिएको छ । प्रहरीले घट’नाबारे छानविन जारी रहेको जनाएको छ ।
← ४ दिनमै कोरोना ठिक हुने औषधि बनाएको बंगलादेका डाक्टरको दाबी ! पुरा पढ्नुहोस्…
मेरी श्रीमतीले मलाई १० वर्षसम्म बला-त्कार गरिन् ! पुरा पढ्नुहोस्… →